उत्तर कोरियाले भन्यो– ट्रम्पको बोली ‘विनासको संकेत’ – www.janabato.com
२२ माघ २०७४, सोमबार ०३:२९ February 5, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
रासस/उत्तर कोरियाले अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘स्टेट अफ यूनियन’ मा गरेको सम्बोधनको आइतबार विरोध गर्दै यसलाई ‘विनाशको नयाँ सङ्केत’ भनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियालाई शत्रुको रूपमा सम्बोधनमा बताएको बिषयलाई लिएर प्योङयाङको यो भनाइ आएको हो।
‘यो अन्तर कोरियाली सम्बन्धलाई राम्रो बन्न नदिने लक्ष्यका साथ आएको उदण्डता हो,‘ उनले भने। राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै दुई मुलुकबीच तनाव चुलिएको छ।
← सगरमाथा आरोही पत्रकारलाई फोनिजले दियो शुभकामना
प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक संस्था न्यायपालिका हो: अरुन्धती राय →
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा नेकपाको कारवाही
२८ माघ २०७४, आईतवार ०६:४४ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा नेकपाको कारवाही
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा रातको समय यातायात सञ्चालनमा रोक
१३ पुष २०७४, बिहीबार ०४:४६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा रातको समय यातायात सञ्चालनमा रोक
नेकपा रुपन्देही र गुल्मीले गर्यो कार्यकर्ता रिहाईको माग
३० कार्तिक २०७४, बिहीबार १०:१५ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on नेकपा रुपन्देही र गुल्मीले गर्यो कार्यकर्ता रिहाईको माग